Ukwahluka kolwimi - AfricArXiv
By I-AfricArXiv , iinyanga 2 iinyanga 2 edlulileyo
Iilwimi zaseAfrika ukufumana amagama esayensi
I-Decolonise Science iya kuqesha abaguquleli ukuba basebenze kumaphepha avela kwi-AfricArXiv umbhali wayo wokuqala ingumAfrika, utshilo umphandi oyintloko uJade Abbott, ingcali yokufunda ngomatshini ezinze eRhawutini, eMzantsi Afrika. Amagama angalinganiyo kulwimi ekujoliswe kulo aya kuphawulwa ukuze iingcali zesigama kunye nabo banxibelelana ngezenzululwazi baphuhlise amagama amatsha. "Akufani nokuguqulela incwadi, apho amagama anokubakho," utshilo u-Abbott. “Esi sisenzo sokwakha isigama.”
By UJohanssen Obanda, iinyanga 5 iinyanga 3 edlulileyo
Ifowuni yokuNgeniswa, iNzululwazi yeDecolonise
Iqela elikwiAfrArAriv liyazingca ukwazisa ukuba sisebenzisana noMasakhane ekwakheni ikhampasi yeelwimi ezininzi ehambelanayo yophando lwaseAfrika ngokusuka kwiinguqulelo zemibhalo-ngqangi yophando engeniswe kwiAfrikaArXiv. Kumanqaku angenisiweyo, amaqela aseMasakhane naseAfrikaArXiv aya kukhetha ukuya kuthi ga kwi-180 xa iyonke ukuze kuguqulwe.
By UJohanssen Obanda, iinyanga 6 iinyanga 3 edlulileyo
I-AI kunye noGuqulelo olungenamthungo loPhando kwiiLwimi zaseAfrika eziSemthethweni
Ngokuqhubela phambili kweNkqubo yoLwimi lweNdalo (i-NLP), kufanele ukuba kube lula kubantu abangathethiyo isi-Indonesia [okanye abaNtsundu] ukuba baqonde amanqaku abhalwe ngesi-Indonesian [okanye iilwimi zaseAfrika]. Kungoko umthwalo wokusebenzisa isiNgesi kwangoko njengolona lwimi luphambili lwenzululwazi bunokwehliswa. ”
By ULuka Okelo, iinyanga 7 iinyanga 3 edlulileyo
Ukuphehlelelwa kweNzululwazi yoToliko
INguqulelo yeSayensi inomdla kuguqulelo loncwadi lwezifundo. INzululwazi yeToliki liqela elivulekileyo elinomdla wokuphucula ukuguqulelwa koncwadi lwenzululwazi. Iqela lidibene ukuxhasa umsebenzi kwizixhobo, iinkonzo kunye nokuxhasa ukuguqulelwa kwesayensi.
By Iqela lokuGuqulela iNzululwazi, iinyanga 9 iinyanga 3 edlulileyo
By Iqela leAfrikaArXiv, iinyanga 9 iinyanga 3 edlulileyo
By UJoel Onyango , iinyanga 9 iinyanga 3 edlulileyo
Ukujongana nokuFunda nokuBhala eSayensi e-Afrika Ngokufikelela ngokuVulekileyo
Ukufikelela okuvulekileyo (i-OA) luyisethi yemigaqo kunye nohlu lwezinto ezenziwa ngazo iziphumo zophando zisasazwa kwi-Intanethi, simahla iindleko okanye ezinye izithintelo zofikelelo. IAfrikaArXiv kunye neNethiwekhi yoLwazi lokuFunda nokuBhala ye-Afrika (i-ASLN) bayasebenzisana ukukhuthaza ukuhanjiswa kwamanqaku e-AfricArXiv kunye nokuguqulelwa kwamanqaku Funda ngokugqithisileyo…
By UJohanssen Obanda kunye no-Abdullahi Tsanni, iminyaka 2 iinyanga 3 edlulileyo
Ukuhanjiswa kolwazi malunga neyona misebenzi iphambili kunye neendlela zokuziphatha zokunciphisa ukusasazeka kwecoronavirus kubonelelwa ngesiNgesi. Zimalunga nama-2000 iilwimi ezikhoyo ezithethwa e-Afrika kwaye abantu banelungelo lokwaziswa ngolwimi lwabo malunga noko kwenzekayo nendlela abanokwazi ngayo Funda ngokugqithisileyo…
By Iqela le -AfRXiv, iminyaka 2 iinyanga 11 edlulileyo
Impendulo ye-COVID-19 yaseAfrika
Ukuqokelela izixhobo kunye nawo onke amanqanaba emibutho yase-Afrika ukuze kulungelelaniswe iimpendulo ze-COVID19 yimibutho yaseAfrika kunye nabaphembeleli abangamawakawaka abantu kunye namakhulu eengca kunye nemibutho yamazwe, ii-CBOs, ii-NPO, oorhulumente kunye nemizi mveliso basebenza nzima ukunciphisa iimpembelelo zobhubhane Ilizwekazi lase-Afrika. Asinjalo Funda ngokugqithisileyo…
By NguJorem, iminyaka 2 iinyanga 11 edlulileyo